Ireo mpanara-maso LG Ultrafine 5K dia mijaly noho ny fahatarana hafa | Avy amin'ny mac aho
Ny mpanara-maso an'i Ultrafine 5K an'ny LG dia mijaly noho ny tarazo vaovao
Andro vitsy lasa izay dia nilaza ny vaovao momba ny olana mahazo an'i LG amin'ireo mpanara-maso 5K sy ireo router WiFi izay teo akaiky teo izahay. Ireo olana ireo dia nifandraika mivantana tamin'ny fanangonana ireo fitaovana ary noho ny tsy fetezan'ny tariby sy ny takelaka dia ny olana voalohany no voalaza. Nihetsika avy hatrany i LG tamin'ny fiantsoana ny famerenana ireo mpanara-maso rehetra izay nananan'ny mpampiasa tao an-trano sy ny famahana ny olan'ny fitaovana ankoatra ny fialantsiny amin'ireo voakasik'izany. Ho fanampin'ireo fanamboarana ireo dia nambara fa ireo mpanara-maso LG Ultrafine 5K vaovao manomboka ny volana febily dia efa nanampy ny vahaolana amin'ny tsy fahombiazana, ka ity toa mampihemotra ny fandefasana entana eo anelanelan'ny 5-6 herinandro mifanandrify amin'ny AirPods ...
Ho fanampin'ity fanemorana ny fandefasana ity raha ny amin'ny fanangonana trano fivarotana na ny fividianana dia tsy misy io izao. Apple dia tsy manana zavatra betsaka holazaina amin'ity lafiny ity Satria tsy vokatra miankina amin'izy ireo izany toa ny AirPods, amin'ity tranga ity dia azonao atao ny manosika LG kely hamaha ny olana fa tompon'andraikitra amin'ny fahatarana sy ny olana sedrain'ireto mpanara-maso ireto na eo aza ny zava-misy izay amidy amin'ny tranokala Apple .
Asongadino ny ampahany amin'ireo olana sedrain'ireo mpanara-maso ireo tsy isalasalana fa "tasy tsara" ho an'ny vokatra izay toa mahavariana antsika tokoa izy ireo raha ny fahombiazana, ny famolavolana ary ny sandan'ny vola, saingy ireo karazana tsy fahombiazana sy fanemorana ireo dia azo antoka fa tsy mahasoa anao mihitsy ary ny ratsy indrindra dia ny fiatraikany amin'ireo mpampiasa efa nividy ny anao ary tsy maintsy nitondra izany tany amin'ny SAT fanamboarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny mpanara-maso an'i Ultrafine 5K an'ny LG dia mijaly noho ny tarazo vaovao
Apple Store voalohany any Aostria izay hisokatra
24 taona izao taorian'ny nijanonan'ny NeXT fanamboarana Hardware